Maraykanka oo qirtay inay ku dileen Duqayn Horjooge ka tirsanaa Alshabaab. – Hornafrik Media Network
Maraykanka oo qirtay inay ku dileen Duqayn Horjooge ka tirsanaa Alshabaab.
By HornAfrik	 On Jul 31, 2017
War saxaafadeed ka soo baxay Taliska Ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa lagu sheegay in duqeyn ku dileen Sarkaal ka tirsan Al-Shabaab, kaasoo ka dhacay agagaarka deegaanka Toora Toorow ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Warka ayaa intaa ku daraya in duqeynta lagu dilay hal dagaalyahan, iyadoo aanay khasaare soo gaarin dad rayid ah, sida lagu yiri war saxaafadeedka.
Lama sheegin magaca sarkaalka lagu bartilmaameedsaday duqeynta, waxaase wali soo baxaya warar kala duwan oo ku aadan sarkaalka lagu dilay duqeynta.
Wasiirka Warfaafinta Xukuumadda Soomaaliya C/raxmaan Yariisow ayaa sheegay in howl gal ay fuliyeen saaxibada caalamiga ee Soomaaliya lagu dilay Sarkaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab oo ahaa ninka u qaabilsanaa qaraxyada iyo dilalka Muqdisho.
Eng. Yariisow ayaa sheegay in Madaxweynaha uu ogolaaday weerarkan lagu khaarijiyay sarkaalka ka tirsan Al-Shabaab.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in shaqsiga duqeynta lagu bartilmaameedsaday ay u badan tahay inuu yahay Wakiilkii Al-Shabaab u qaabilsanaa Gobolka Banaadir oo lagu magacaabo Sheekh Cali Maxamed Xuseen oo loo yaqaano Cali Jabal.
Ilo kala duwan ayaa sheegaya in loo maleynayo in duqeynta lagu dilay Cali Jabal oo muddo dheer ahaa Wakiilka Al-Shabaab u qaabilsan Gobolka Banaadir.
Ma jirto cid xaqiijisay arrintan, mana jirto wax war ah oo ka soo baxay Al-Shabaab oo ku aadan duqeynta ka dhacday agagaarka deegaanka Toora Toorow.
Wasiir Xoosh oo mar kale baraha Bulshadda ka soo muuqday isagoo u gafaya Baarlamaanka Somalia.
Guddi Saraakiil ah oo ka Shaqaynaya Midaynta Howl-gallada iyo Tababarrada Ciidamada Qalabka Sida oo la magacaabay.